महँगो छैन हाउजिङ र अपार्टमेन्टको बसाइ, कम खर्चमै ब्यवस्थित बसाइ, मासिक कति खर्च हुन्छ? :: BIZMANDU
प्रकाशित मिति: Oct 28, 2018 8:58 AM
काठमाडौं। अग्ला टावर र व्यवस्थित घरहरूको कोलोनी देख्दा धेरैलाई लाग्न सक्छ, अपार्टमेन्ट वा हाउजिङको बसाइ निकै खर्चिलो हुन्छ। हाउजिङ तथा अपार्टमेन्टहरूमा स्ट्रिट लाइट, खानेपानी, व्यवस्थित ढल प्रणाली, फोहोर व्यवस्थापन र सुरक्षा गार्ड इत्यादि सुविधा सबै परियोजनाले उपलब्ध गराएका छन्। यीसहित फायर हाइड्रेन्ट, ग्रोसरी वा मार्ट, अस्पताल, मुभी थिएटर, स्विमिङ पूल, जिम, साउना, जाकुजी, जगिङ ट्र्याक, ब्याटमिन्टन, बास्केटबल, स्क्वास, टेनिस कोर्ट, स्नुकर÷पूललगायतका सुविधा भएका आवास परियोजनाहरू पनि नेपालमा छन्।
अपार्टमेन्ट वा घरको क्षेत्रफलका अनुसार प्रतिवर्गफीट शुल्क तोकिएका परियोजना पनि थुप्रै छन्। कौशलटारस्थित क्लासिक टावरमा सुरूमै प्रतिवर्गफीट एक सय रुपैयाँ र बालकुमारीस्थित वेस्टार रेसिडेन्सीमा १ सय ७५ रुपैयाँ सामुदायिक सुविधा तथा व्यवस्थापन शुल्क (कम्युनिटी फी) बापत तिर्नुपर्ने हुन्छ। यसअनुसार, यदि कसैले एक हजार वर्गफीटको अपार्टमेन्ट लिएको छ भने उसले बढीमा १ लाख ७५ हजार रुपैयाँ एकपटक तिरेपछि आजीवन सम्पूर्ण सामुदायिक सुविधा प्रयोग गर्न पाउँछ।
काठमाडौंको सानो गौचरनस्थित केएल रेसिडेन्सीका अपार्टमेन्टमा बस्नेले मासिक प्रतिवर्गफीट साढे ४ रुपैयाँ तिर्नुपर्ने हुन्छ। नख्खुमा रहेको सनराइज अपार्टमेन्ट्समा ग्राहकले अपार्टमेन्ट खरिद गर्ने समयमा २५ हजार रुपैयाँ ‘सोसाइटी डिपोजिट’ रकम तिर्नुपर्नेछ, जसलाई सोसाइटीको खातामा जम्मा हुन्छ। यसबाहेक सामुदायिक सुविधा तथा व्यवस्थापन शुल्क मासिक प्रतिवर्गफीट एक रुपैयाँ ७५ पैसा मात्र राखिएको छ।
सीई ग्रुपअन्तर्गतकै सीडी डेभलपर्सले धापासीमा बनाइरहेको ग्राण्डी टावर अपार्टमेन्टमा कम्युनिटी व्यवस्थापन शुल्कबापत कम्पनीले हेरक अपार्टमेन्टबाट एक लाख रुपैयाँ उठाउने गरेको कम्पनीका महाप्रबन्धक शम्भु फुयाँल बताउँछन्। यसबाहेक बत्ती, पानी, सरसफाइ, सुरक्षा आदि सुविधाका लागि हरेक अपार्टमेन्टबाट बिल्ट–अप एरियाअनुसार मासिक ५ हजारदेखि १० हजार रुपैयाँसम्म तिर्नुपर्ने हुन्छ।
काठमाडौंको रामकोटस्थित पद्म कोलोनीमा पनि ग्राहकले घर किन्दा नै ‘कम्युनिटी फी’बापत एकमुष्ट थप २ लाख रुपैयाँ तिरे पुग्छ। भविष्यमा कोलोनीको घर कसैले बिक्री गरे उक्त रकम फिर्ता पाउने कम्पनीका महाप्रबन्धक गोपाल बजगाईँले बताए। काठमाडौंको मूलपानीस्थित नेपालकै सबैभन्दा ठूलो (कुल ८ सय घर) आवास परियोजना ग्रीनहिल सिटीमा पनि घर खरिदकर्तासँग सुरूमै एकमुष्ट २ लाख रुपैयाँ कम्युनिटी फी उठाउने र सोपछि अन्य कुनै शुल्क तिर्नु नपर्ने कम्पनीका मार्केटिङ म्यानेजर सौरभ तिमल्सिनाले बताए।
केही परियोजनामा डेभलपरले व्यवस्थापन समिति गठन भएपछि उसको खातामा रकमान्तर गर्ने गरी सुरूमै एकमुष्ट केही रकम उठाउने गरेका छन्। केही परियोजनामा युटिलिटी शुल्कबापत मासिक निश्चित रकम उठाउने गरेको पनि पाइन्छ। जस्तै, सीडी डेभलपरको निर्माणाधीन ‘सानोभ¥याङ हाउजिङ’ (सानोभर्याङ) र ‘कृति कोलोनी’ (चोभार) मा सामुदायिक शुल्कस्वरूप हरेक घरले मासिक ३ हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्ने तोकिएको छ। बृहत ग्रूपले आफ्ना परियोजनामा घर खरिदकर्ताले विद्युत्, टेलिफोनजस्ता युटिलिटीका लागि मासिक दुई हजार रुपैयाँ उठाउने गरेको कम्पनीकी बिक्री संयोजक सविता जोशीले जानकारी दिइन्।
सिभिल ग्रुपले निर्माण गरेको सिभिल होम्स्मा भने कम्युनिटी म्यानेजमेन्ट कमिटी गठन भइसकेपछि उसैले शुल्कको पनि निर्धारण गर्ने कम्पनीका मार्केटिङ म्यानेजर सुदर्शन पराजुलीले बताए। ग्रीनहिल सिटीले पनि इमाडोलमा निर्माणाधीन परियोजनामा यही प्रणाली अपनाएको छ। सिजी प्रोपर्टिज्का परियोजनामा मासिक प्रतिवर्गफीट २ रुपैयाँ सामुदायिक सुविधा शुल्क तोकिएको छ।
महँगो छैन हाउजिङ र अपार्टमेन्टको बसाइ, कम खर्चमै ब्यवस्थित बसाइ, मासिक कति खर्च हुन्छ? को लागी कुनै प्रतिक्रिया उपलब्ध छैन ।